JM Fitness (Lady Fitness Club), Yangon, Myanmar
JM Fitness ( Lady Fitness Club ) ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် သက်တမ်းအားဖြင့် ၃နှစ်ကျော်ရှိပြီး ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးသီးသန့် Fitness Club တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Trainer ကြေးထပ်ပေးစရာမလိုပဲ ဝါရင့်သီးသန့် Trainer များဖြင့် စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေသည့် Club တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သီးသန့်Trainer ခေါ်ချင်သူများအတွက်လည်း Personal Trainer များကို သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်းဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။
အထူးအစီအစဉ်အနေနှင့် တပတ် ၃ ရက် တွင်Cardio, Zumba နှင့် Fitball အတန်းများကို Free ဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီး အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်းမှာ Group Training တွေလဲ ပြုလုပ်ပေးနေသည့်အတွက် ပေးချေရသော သင်တန်းကြေးနှင့် တန်သည့် JM Lady Fitness Club ကို လာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကသင်တန်းကို အခြေခံမှစတင် သင်ကြားပေးသော Class များလည်းဖွင့်လှစ်ထားပြီး လူကြီးများသာမက ကလေးများအတွက်လည်း အကသီးသန့် အတန်းခွဲများကို JM မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ အကသီးသန့်လေ့ကျင့်ချင်သူများအတွက် ခန်းမငှားရမ်းသော ဝန်ဆောင်မှုလည်းရှိပါတယ်။
အခြားဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့ Memberအားလုံးအတွက် ရေချိုးခန်း ထားရှိပေးထားပြီး ၊ အားကစားဖိနပ်ကို နေ့စဉ်ယူဆောင်မလာချင်သူများအတွက် ဖိနပ်ထည့်ရန် Locker များလည်း ထားရှိပေးထားပါတယ်။ အခုလို ပေးဆောင်ရသည့် member ကြေးနဲ့တန်အောင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းသည့် JM Lady Fitness ကို ပျော်ပျော်ပါးပါး အတူတူကရင်း ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထောက်ကူဖြစ် ခန္ဒာကိုယ်မှာ ပိုလာတဲ့ အဆီတွေကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ဖို့ လာရောက်ကစားကြဖို့ နွေးထွေးပျူငှာစွာဖြင့် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
if you want to see more CLASS
No.40,Bawga Theikdi St.,2Quarter, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
© 2020 JM Lady Fitness Club.
All rights reserved. Website Generator by NetScriper